Fifaninanana maka sary : afaka mandray anjara ny rehetra | NewsMada
Fifaninanana maka sary : afaka mandray anjara ny rehetra
Mivoatra be ny teknolojia mikasika ny fakana sary ary mihamaro hatrany ireo mpakasary. Misy hatrany anefa ny matihanina sy ny tsy mbola mahafehy loatra izany. Ny hisivanana azy ireo indrindra ny tanjon’ny fifaninanana, karakarain’ny LensCulture, gazety boky mivoaka amin’ny « internet ».
« Street Photography Awards » ny anaran’ny fifaninanana, izay efa tonga amin’ny andiany fahefatra amin’ity taona ity. Misokatra ho an’ny rehetra ny fifaninanana, saingy miompana tanteraka amin’ny lohahevitra tokana ny sary tsy maintsy alaina. Tsy inona izany fa ny zava-misy sy ny « fiainana » eny an-dalana eny.
Handalo eo anoloan’ireo mpitsara, matihanina amin’ny tontolon’ny sary, avokoa ireo sanganasa halefa any. Hanao fanamarihana izy ireo. Izany hoe, hanampy ny mpandray anjara amin’ny fanatsarana hatrany ny fakana sary izany. Ankoatra izay, azo lazaina ho loka ho an’ny mpandray anjara rehetra ny fahitan’ny mpitsidika ny tranonkalan’ny LensCulture ny sarin’izy ireo.
Na izany aza, anisan’ny loka lehibe miandry ireo enina voalohany sy ireo valo hotsongain’ny mpitsara ny fampirantiana any Arles miampy vola mitentina 22.000 dolara. Eo koa ny fandefasana ny sarin’izy ireo amina « festivals » iraisam-pirenena maromaro, any ivelany any. Tsy hifarana ny fisoratana anarana amin’ity fifaninanana ity raha tsy ny 1 mey izao.
Examens officiels: le délai d’inscription repoussé 21/04/2021
Traitement du Covid-19: deux nouveaux hôtels à la rescousse 21/04/2021
Rapport du CSI: un système anti-corruption à compléter 21/04/2021